रोडमा रेकर्ड तोडियो, रेल र पानीजहाजमा जग बस्यो
शुक्रबार, ६ बैशाख २०७६
रघुवीर महासेठ मंगलबार, २६ चैत्र २०७५
हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सविधान कार्यान्वयनका चरणमा छौं । तीन तहका सरकार गठन भएर सबैले आआफ्नो काम आरम्भ गरेका छन् । यस हिसाबले हाम्रा सरकारहरूका लागि यी प्रारम्भिक वर्षहरू भनेको आधार वर्ष पनि हुन् । तीनै तहका सरकारका लागि बजेट बिनियोजनदेखि जनशक्ति व्यवस्थापन त छँदैछ । त्यसका अलावा नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेका सयौँ कानुन पनि हामीले यही समयमा निर्माण गरिरहेका छौँ ।
हामीले सरकार फेरबदलको लामो शृंखला भोगेका छौँ । एउटा सरकार गठन भएर जब त्यसले काम आरम्भ गर्नै लाग्थ्यो फेरि अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भइहाल्थ्यो । प्रत्येक सरकार म्यादीको मानसिकतामा आउँथे र सोही बमोजिम चल्ते–चलातेको स्वरूपमा घर फर्किने गर्थे । ०४६ सालको परिवर्तनयता पहिलो पटक हामीले एउटा बलियो सरकार पाएका छौँ । दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीको एकतापछि सम्भव भएको यो जनमत शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि हो । मानिसहरूले हाम्रो सरकारलाई निकै बलियो सरकार र हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई राजा महेन्द्रपछिको शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखका रूपमा समेत विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
हामीलाई थाहा छ, जनताका असीमित आवश्यक्ता छन् । हातमा विश्व देख्न र पढ्न सक्ने आजको समयमा विकास र समृद्धिका लागि कोही पनि पर्खिन तयार छैनन् । पूर्वाधार विकासको उत्कट चाहनाले मानिसलाई अधैर्य बनाइरहेको छ । जनताको अपार विश्वासलाई किञ्चित पनि तलमाथि पर्न नदिने गरी सरकारले पहिलो दिनबाटै आफ्नो काम थालनी गरिसकेको थियो ।
हामीलाई थाहा छ, जनताका असीमित आवश्यक्ता छन् । हातमा विश्व देख्न र पढ्न सक्ने आजको समयमा विकास र समृद्धिका लागि कोही पनि पर्खिन तयार छैनन् ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको नेतृत्वमा रहेको यो सरकारले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको एक मात्र उद्देश्य राखेर काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यही सपना हाम्रो सपना र सारा नेपालीको सपना त्यही हो । उहाँको नेतृत्वमा अत्यन्त सुझबुझपूर्ण तरिकाले हामीले निन्तर काम गरिरहेका छौँ । सरकारले भर्खरै आफ्नो एक वर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेको छ । एक वर्ष कार्यकाल सम्पन्न गरेपश्चात् प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारको एकवर्षे कार्यप्रगति विवरण जनताको बीचमा प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ । र हामी मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो विभाग अन्तर्गत भएका महत्वपूर्ण कामहरूको फेहरिस्त जनसमक्ष पेस गरिसकेका छौँ । हाम्रो मन्त्रालयले पनि गएको ५ गते मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिसकेका थियाँै । आमजनताले पूर्वाधार क्षेत्रमा भइरहेका उपलब्धिलाई विस्तारै महसुस गर्न पनि थालिसकेका छन् ।
सरकार गठन भएका बेला राजधानी काठमाडौँका अधिकांश सडकहरूको हालत के थियो ? आज कलंकी–नागढुंगा र बौद्ध–साँखु सडकबाहेक प्रायः अन्य सबै सडक सहज भइसकेका छन् । ती दुई सडक पनि छिटै स्तरोन्नतिसहित निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् । मुग्लिन–नारायणगढ सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा जुन सास्ती आमजनताले भोग्नुपरेको थियो, आज त्यो हटिसकेको छ । सरकारले तीव्र गतिमा आफ्नो काम नगरेको भए ती कामहरू सम्पन्न हुने थिएनन् ।
हो हामीलाई थाहा छ, जनताको व्यापक चाहना र सरकारका सीमितताका बीच कहीँ न कहीँ तालमेल नमिलेको चाहिँ पक्कै हो । फेरि आज भौतिक विकासको जुन सन्दर्भ छ, त्यो संघीय सरकार एक्लैले मात्रै गर्ने गरी तय भएको छैन । संघीय सरकारका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय सरकारसमेत यही भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि केन्द्रित छन् । हामी तीनै तहका सरकारले आआफ्नो सीमामा रहेर विकास गर्नुपरिरहेको यथार्थ हाम्रासामु विद्यमान छ ।
सरकार गठन भएका बेला राजधानी काठमाडौँका अधिकांश सडकहरूको हालत के थियो ? आज कलंकी–नागढुंगा र बौद्ध–साँखु सडकबाहेक प्रायः अन्य सबै सडक सहज भइसकेका छन् । ती दुई सडक पनि छिटै स्तरोन्नतिसहित निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् ।
काम नहुँदाको अपजस जति सबै केन्द्र सरकारलाई दिनुपूर्व हामीले सोच्नुपर्छ कि हामी तीन तहका सरकार आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी अनुसार काम गरिरहेका छौँ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो संविधानको व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू संघीय सरकारको मातहत होइनन् । तीनटै सरकार जब समन्वयका साथ काम अघि बढाउँछन्, तब मात्रै सोचेअनुसारको तीव्र विकास हुने देखिन्छ ।
अब प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पहिलोपटक सरकारको अभ्यास गरिरहेका छन् । बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अहिलेसम्म चलि नै रहेको छ । तर सबै सरकारहरूले अत्यन्तै सकारात्मक सोच र इमान्दारीका साथ कामको आधारशिला खडा गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि संघीय सरकारले त हरेक क्षेत्रमा यो एक वर्षको अवधिमा रेकर्डतोड काम गरेको छ ।
जनताद्वारा निर्वाचित सरकारले संविधानका व्यवस्था र भावनालाई समेत खयाल गर्दै आफ्ना काम अगाडि बढाइरहेको छ । हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ । त्यसैले सबैका भावना, विचार र अधिकारहरूलाई समेत हामीले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर एउटा कुरा के भने हामी विषयको गइराइसम्म पुग्दै नपुगी सतही बिश्लेषण गर्न थाल्यौँ र विरोधका लागि विरोध मात्रै गर्न थाल्यौँ भने हामी कहाँ पुगौँला र ? सरकार गम्भीर ढंगले काम गरिरहेको छ । विकास र समृद्धि कुनै रातारात हुने कुरा पनि होइन । यसका लागि स्पष्ट योजना, दृढ इच्छाशक्ति र त्यतिकै कार्यान्वयन क्षमता पनि आवश्यक छ । र हामीले विकासका लागि योजना सार्वजनिक गरिसकेका छौँ ।
त्यो योजना कार्यान्वयन गर्न दृढ इच्छाशक्तिकै साथ अघि बढिरहेका छौँ । सकारात्मक परिणाम देखिन सुरु भइसकेका छन् । पूर्ण परिणामका लागि त हामीले धैर्य गर्नु नै पर्ने हुन्छ । तर तपाईंलाई थाहा छ यो सरकार गठन भएको केही महिनाभित्र चौतर्फी आलोचना सुरु भयो । हिजो लामो समय सरकारका सबै अवयव नियन्त्रण गरेर बसेकाहरू नै हिजो रामराज्य भएजसरी आलोचना र उपदेशका वाणी बर्साउन थाले । आफ्नो निम्छरो विगतलाई समेत बेवास्ता गर्दै हिजो के के न भएको थियो, केपी ओली सरकार आउनेबित्तिकै बर्बाद भएझैँ अभिनय गर्न थाले । उनीहरूकै आलोचना र उपदेशलाई तथ्य सम्झिँदै केही मिडियाहरू समेत ओरालिए र यो सरकारको छवि धुमिल बनाउने काममा कम्मर कसेर लागे । तर आधारभूत तहका जनताको अपार विश्वासले गठन भएको यो सरकार कसैका आलोचनाउपर टिप्पणी गर्नुभन्दा आफ्नो निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिमा निरन्तर इमानका साथ अघि बढिरहेको छ ।
दृढ इच्छाशक्तिकै साथ अघि बढिरहेका छौँ । सकारात्मक परिणाम देखिन सुरु भइसकेका छन् । पूर्ण परिणामका लागि त हामीले धैर्य गर्नु नै पर्ने हुन्छ ।
हिजो के अवस्था थियो सबै नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् । केही मानिसका के स्वार्थ पूरा भइरहेका छैनन् त्यो मलाई थाहा छैन । अझ भनौँ हामीकहाँ केही यस्ता स्वार्थी तत्व छन्, जसले नेपाललाई स्थिर विकासको मार्गमा अघि बढेको हेर्नै चाहँदैनन् शायद । त्यसैले त सधैँ नकारात्मकताका खेती मात्रै गरिरहेका छन् । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मुलुक हामीले नै बनाउने हो । बाहिरको अरू कोही आएर हाम्रो मुलुक बनाइदिने होइन । हामी सधैँ र सबै विषयमा नकारात्मक भएर आफ्नो देशभित्र अराजकता मच्चाएर हिँड्ने हो भने मुलुक कसरी बन्छ र ? म दावाका साथ भन्छु यो सरकारले बनाउन नसकेको मुलुक अर्को कस्तो सरकारले बनाउँछ र ?
कोही मानिसहरू या स्वार्थ समूहहरू यतिसम्म सत्यलाई पनि झुटो सावित गर्न तल्लीन हुन्छन् कि मानौँ उनीहरू त्यसो गर्ने शपथ लिएर बसिरहेका छन् । पूरै सरकारलाई असफल बनाउन गरिएका षडयन्त्रतर्फ म अहिले जान्नँ । तर एउटा मात्रै उदाहरण जो मसँग सम्बन्धित छ, बस त्यत्ति चाहिँ तपाईंहरूलाई सुनाउँछु । सरकार गठन भएलगत्तै हामीले बडो सुझबुझपूर्ण तरिकाले लामो समयदेखि विद्यमान रहेको यातायात क्षेत्रको गैरकानुनी सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय लियौँ । त्यो कुनै एकजनाको पहलबाट भएको काम थिएन । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि तालुकदार सबै मन्त्रालयहरूले लामो छलफल गरेर त्यसका परिणामहरूको समेत ख्याल गरेर सामूहिक रूपमा लिइएको निर्णय थियो ।
त्यस्तो साहसिक निर्णय लिने तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्व मैले लिइरहेको थिएँ । तर केही स्वार्थ समूहरूले त्यति ठूलो निर्णय लिने एक जना सहसचिव हुन् म चाहिँ त्यसको विरोधमा छु भन्ने आशयका झुट विषयहरू निरन्तर बढाइचढाइ गरेर सार्वजनिक गरिरहे । कतिसम्म अचम्म लाग्ने विषय भने सिंगो सरकारको निर्णय थियो र त्यसका लागि सरकारका सबै मन्त्रालयहरू सम्बन्धित हुनेसम्म सबै एकजुट भएर लागेका थिए । प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहनुभएको थिएन भने उहाँको चाहनाबमोजिम म सक्रिय भएको थिइनँ भने त्यो सम्भव हुने थियो र ?
तर केही मानिसहरूले मलाई सिन्डिकेटको पक्षधर र हाम्रै मन्त्रालयको एक जना सहसचिवलाई सिन्डिकेट हटाउने साहसिक निर्णयकर्ताको रूपमा जनतामाझ भ्रम छरे । सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने अतिसामान्य कुरा के भने सहसचिव या भनौँ कर्मचारीले मात्रै यस्तो निर्णय गर्न सक्ने भएको भए राजनीतिक नेतृत्व किन चाहिन्थ्यो र ? कर्मचारीले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो । यद्यपि त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालय मातहतका सबै कर्मचारी साथीहरूको सक्रिय र उल्लेख्य भूमिका थियो र अहिले पनि छ ।
तर केही मानिसहरूले मलाई सिन्डिकेटको पक्षधर र हाम्रै मन्त्रालयको एक जना सहसचिवलाई सिन्डिकेट हटाउने साहसिक निर्णयकर्ताको रूपमा जनतामाझ भ्रम छरे । सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने अतिसामान्य कुरा के भने सहसचिव या भनौँ कर्मचारीले मात्रै यस्तो निर्णय गर्न सक्ने भएको भए राजनीतिक नेतृत्व किन चाहिन्थ्यो र ?
हामी लोकतान्त्रिक सरकार हौँ । सिन्डिकेटधारी व्यवसायी पनि हाम्रै व्यवसायी हुन् । अब समय दिएर सबै कानुनी प्रावधानलाई समेत मिलाएर हामी त्यो सिन्डिकेट अन्त्यको निर्णयलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दैछौँ । जतिबेला हामीले निर्णय लिएका थियौँ । त्यतिबेला हामीलाई कैयन पक्षबाट लोकतन्त्र विरोधी समेत भनियो । हो हामी व्यक्तिगत सम्पत्तिको सम्मान गर्छौं, लोकतन्त्रलाई पूर्णरूपमा मान्छौं, त्यसैले सबै विषयलाई मध्यनजर गरेर त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न गइरहेका छौं ।
मैले भन्न खोजिरहेको कहाँ हो भने विषयको गहिराइमा पुगेर मात्रै निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ नत्र न हामी गन्तव्यमा पुग्छौँ न मुलुकलाई नै गन्तव्यमा पुर्याउन सक्छौँ । यो त एउटा सामान्य उदाहरण मात्रै हो । यस्ता जनविरोधी समूह र राजनीतिक दलहरूले सरकारले गरेका कैयौं निर्णयहरूलाई जनताको बीचमा मजाक बनाउने कोसिस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएर लागू भइसकेको छ । एउटा तप्काले त्यति जनप्रिय र ऐतिहासिक कामको समेत मजाक उडाउन भ्याए । तर हामीलाई विश्वास छ तिनै मजाक उडाउने कैयौंका आफन्तजन यही जनप्रिय कार्यक्रमबाट अबको केही समयमै लाभान्वित हुन थाल्नेछन् ।
अब भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो एक वर्षको अवधिमा हामीले रेकर्डतोड काम गरेका छौँ । हामीले सरकार गठन भएको एक वर्षमा छ लेन, चार लेन र दुई लेनका गरी आठ सय किलोमिटर सडक बनाएका छौँ । नेपलकै इतिहासमा एक वर्षमा यति सडक निर्माण भएको रकेर्ड हामीसँग छैन । त्यस्तै वर्षमा मुस्किलले ३० देखि ३५ पुल बन्ने गरेकामा यस वर्ष हामीले एक सय पुल निर्माण गरिसकेका छौँ । आर्थिक सीमितताको सामना गर्नुपरेन भने हामी तीन सय पुल निर्माण गर्नेसम्मको लक्ष्य लिएका छौँ । यो एक वर्षमा हामीले १४ सय किलोमिटर सकड ग्राबेल गरिसकेका छौ । त्यो पनि आफैँमा ऐतिहासिक काम हो । ग्राबेलको काम मुख्य रूपमा पहाडी क्षेत्रको लाइफलाइन मनिएको मध्यपहाडी राजमार्गमा भएको छ ।
सडक र पुल निर्माणका ठेक्का व्यवस्थापन समेत उल्लख्य सुधारका काम भएका छन् । प्रधानमन्त्रीलेज्यूले पाँच वर्षभित्रमा छ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने जुन योजना सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, त्योभन्दा पनि बढी सडक निर्माण हामी गर्नेछौँ । यही वर्ष विकट डोल्पाको दुनैसमेत राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । कर्णाली, कालीगण्डकी लगायतका करिडोरमा सडक विस्तार तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका केही सडक अयोजनाको मात्रै मैले तपाईंसँग भनिरहेको छु । तर यो एक वर्षभित्र यति तीव्र गतिमा काम भएको छ कि यसको परिणाम ग्रामीण भेगका जनताले तुरुन्तै पाउनेछन् ।
जनतालाई आवागमनमा अप्ठेरो भइरहेको राजधानीभित्रकै सम्पन्न हुन बाँकी दुई सडक कलंकी–नागढुंगा र बौद्ध–साँखु खण्ड जेठ महिनाभित्र सम्पन्न भइसक्ने छन् । जसका लागि यतिबेला तीव्ररूपमा काम भइरहेको छ । यस हिसाबले भन्दा हामीले सडक निर्माणका क्षेत्रमा रेकर्डतोड काम सम्पन्न गरेका छौँ र यो वर्षको आधार हेरेर आगामी पाँच वर्षमा सडक सञ्जालमा मुलुकले कायपलट गर्नेछ ।
यस वर्ष हामीले रेलवेमा पनि ऐतिहासिक फड्को मारेका छौँ । रेलमार्गको सन्दर्भमा डिपिआरको काम सकिएको छ । हामीले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको कामै थालिसकेका छाैं । बर्दिवासबाट निजगढ आउने सालमा हामीले दुई ठाउँबाट अझै थप्दै छौँ । काँकडभिट्टाभन्दा पश्चिम र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीभन्दा पूर्व ०७७/७८ मा पाँच ठाउँमा सुरु गरेर पाँच/छ वर्षभित्रमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने पनि हामीले सोच बनाइरहेका छौँ । हामी ३५ किलोमिटरमा त तत्कालै रेल कुदाउन गइरहेका छौँ ।
मानिसले पानीजहाज कुदाउने सरकारको सम्भव योजनालाई अहिलेसम्म पनि मजाकको विषय बनाइरहेका छन् । तर हामीले कार्यालय खोल्यौँ, कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापन गर्दैछौ र सँगसँगै गण्डक क्षेत्रमा सर्वे पनि गरिसकेका छौँ ।
बर्दिवासबाट निजगढ आउने सालमा हामीले दुई ठाउँबाट अझै थप्दै छौँ । काँकडभिट्टाभन्दा पश्चिम र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीभन्दा पूर्व ०७७/७८ मा पाँच ठाउँमा सुरु गरेर पाँच/छ वर्षभित्रमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने पनि हामीले सोच बनाइरहेका छौँ । हामी ३५ किलोमिटरमा त तत्कालै रेल कुदाउन गइरहेका छौँ ।
नेपाललाई लक्षित गरेर भारत सरकारले जुन झारखण्ड राज्यको साहेबगन्जमा जुन टर्मिनल बनाएको छ । छ हजार मेट्रिक टन बोकेर पानीजहाज आउँछ । त्यसको बाटोको पनि हामीले सर्भे गरेर आइसकेका छौँ । विराटनगरको रानी–जोगबनीदेखि लिएर साहेबगन्जसम्मको हाम्रो यही मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा टिम गएर रिपोर्ट पनि दिइसक्नुभएको छ । त्यसकारणले यसमा पनि हामीले फड्को मार्न गइरहेका छौँ ।
अनेक प्रतिकूलताका बीच सरकारले जसरी निर्दिष्ट लक्ष्यसहित ऐतिहासिक काम गरिरहेको छ त्यसलाई हामीले उत्साहपूर्ण रूपमा लिएका छौँ । हाम्रै मन्त्रालयअन्तर्गत यातायातदेखि पानीजहाजसम्मका सबै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम भएका छन् । परिणामका लागि आधार खडा गरिएको छ । केही स्वार्थ समूहहरू सरकारको यो तीव्र विकासको गतिबाट तिलमिलाएर फेरि पनि विरोधको बहाना खोजिरहेका छन् । हामी भन्न चाहन्छौँ, तपाईंहरू खुलेर विरोध गर्नुहोस्, सरकारको बाटो छेक्ने प्रयास गरि नै रहनुहोस् तर सरकार दृढ संकल्पका साथ जनताप्रति इमान्दर भएर आफ्नो लक्ष्यमा अघि बढिरहेको छ र मुलुकलाई हरहालतमा विकासको गतिमा लैजान्छ ।
(भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महासेठसँगको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, २६ चैत्र २०७५
कर छल्नेदेखि हुण्डी खानेसम्मलाई विभूषण
श्रीमान्, चुक्नुभयो कि !
'राष्ट्रियता केपी ओलीलाई जिम्मा लगायौँ'
हामीलाई संस्कृतको आवश्यकता छ
धेरै अनियमिततामा ठूला नेता एकै ठाउँ देखिएका छन्
कस्ताे छ तपाई‌ंकाे आजकाे भाग्य ? (राशिफल)
खुट्टा गन्हाउने समस्याबाट यसरी छुटकारा पाउनुहाेस्
सकियाे बिस्केट जात्रा
दुर्घटनामा घाइतेलाई अस्पताल पुर्‍याउने डीएसपी हुमागाईंलाई दिए सबैले धन्यवाद
‘पसिना’को ट्रेलर सार्वजनिक
सगरमाथा आरोहण गर्दै साहित्यकार सापकोटा
उपत्यकाव्यापी स्थलगत चित्रकला कार्यशाला सम्पन्न
शताब्दी पुरुषले भने : नेपाली कृतिले नोबेल पुरस्कार पाएको हेर्ने इच्छा छ
नगेन्द्र थापा क्षेत्री